Didy jadona : Fahasamihafan'ny versiona roa - Wikipedia
Didy jadona : Fahasamihafan'ny versiona roa
Didy jadona (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 20 Desambra 2014 à 16:17
14 octets ajoutés , il y a 6 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 20 Desambra 2014 à 16:14 (hanova)
(Pejy voaforona amin'ny « Ny '''didy jadona''' dia firenena iray izay olona iray na antoko politika manana ny fahefana hanao izay tiany. Ao amin'ny didy jadona, matetika tsy manana zo maro na... »)
Endrika tamin'ity 20 Desambra 2014 à 16:17 ity (hanova) (esory)
Ny mpanao didy jadona dia avy amin'ny fitondrana noho ny ny antony maro toa ny olana ara-tsosialy goavana na ny tsy fananana asa, ny vidim-piainana, na ny korontana eo amin'ny mponina. Ny mpanao didy jadona dia tokony tohanan'ny vondrona mahery, toy ny tompon-tany, ny tompon'ny orinasa tsy miankina, tompon'ny banky na indraindray andrim-panjakana toy ny Eglizy Katolika mba nametraka lalàna sy ny filaminana an-kery. Izany hery izany amin'ny ankapobeny dia mikendry ny ampaha mahantra ny fiaraha-monina, toa ny mpiasa tsy an'asa, foko vitsy an'isa, kilasy miasa sy ny tanàna natao tamin'ny tanàna baoritra. Ohatra tamin'izany, ny fitondrana jadona any [[Amerika Latina]].
Ny mpanao didy jadona dia mila manao zavatra maro mba nametraka ny fitondrana jadona; dia mila manaisotra ny mpanohitra (izay mety ho ara-politika na ara-pivavahana) - ny sasasny dia atsofoka am-[[fonja|ponja]], atao [[sesitany]] (naniraka ivelan'ny firenena), na vonoina. Dia avy eo mila mandrara (na tsy hamela) antoko politika izay manohitra ny fitondrany ireo mpanao didy jadona. Dia haka ny fanana'ny antoko politika toa ny birao sy ny toy izany. Ny mpanao didy jadona dia mety hamoana na manenjika ny sasany na [[andrim-panjakana]] na ny fivavahanafinoana heveriny fa diso. Ny mpanao didy jadona ihany koa dia mila mamoana na manakatona andrim-panjakana demokratika toa ny parlemanta ary indraindray ny kaongresy. Misy fikambanana ara-tsosialy, toy ny vondrona mampiaro ny [[zo sivily]], ny fikambanana miaro ny [[zon'olombelona]], foibe fanampiana ara-dalàna, [[sendika]]m-pianatra, fikambanam-pampianatra, ny varotra na ny mpiasa sendika ihany koa ny vita sy ireo izay maharitra amin'ny asa toy izany dia mety hovonoina. Ny mpanao didy jadona dia tokony efa misy manitsy ny lalàm-panorenana, na nametraka iray vaovao tanteraka. Izany no mahatonga ny hery hanaja ny [[lalàm-panorenana]] (amin'izay dia tsy iadian-kevitra). Mpanao didy jadona dia foana ny fitsipika amin'ny [[fampihorohoroam-panjakana]], izay ahitana amin'ny [[polisy miafina]], borigady famonoana, fisamborana kisendrasendra na [[tsy fahazoana mivezivezy]] amin'ny alina, tsy voafetra ny fisamborana tsy misy fitsarana sy ny tambajotra ny fampijaliana foibe sy tany amin'ny toby fitanàna. Ny sasany dia manangana fitondrana jadona dia mamorona fahavalo anatiny (ao amin'ny firenena) noforonina (na tsy misy) mba hanamarinana (hanome antony) ny fampiasana ny herisetra ara-tafika amin'ny mponina tsy manan-pitaovam-piadiana.
[[Fitondràm-panjaka]] (fanjakana ananan'ny mpanjaka fahefana feno eo amin'ny firenena) dia azo heverina ho toy ny didy jadona, fa matetika tsy antsoina hoe mpanao didy jadona. Matetika tsy tian'ny olona ny didy jadona, satria tsy tiana ho baikoana. Ny ankamaroan'ny mpanao didy jadona dia tia tena ary mitondra olona ho fahevana ihany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/694067"